Global Voices teny Malagasy · Fitantaran’olon-tsotra mikasika ny Azia Atsinanana tamin’ny Septambra 2014
Azia Atsinanana · Septambra, 2014
Tantara mikasika ny Azia Atsinanana tamin'ny Septambra, 2014
Adinoy Ny Rano Mangatsiaka. Mihantsy ireo Mpanao Politika ireo Mponin'ny Tanàna Ambany Mba Handeha Amin'ny Fitateram-bahoaka Ao Anatin'ny Ora Fiaingàna
Filipina09 Septambra 2014
Nandray anjara tamin'ny #MRTChallenge ny Loholona Grace Poe ny herinandro lasa teo, nanaraka izany ihany koa ny mpitondra tenin'ny Filoha, i Abigail Valte sy i Edwin Lacierda, andro vitsivitsy taty aoriana.
Korea Atsimo09 Septambra 2014
Timor Atsinanana06 Septambra 2014
Havela Hifidy i Hong Kong — Raha Voasivana Ireo Kandidà
Hong Kong (Shina)04 Septambra 2014
"Manainga ireo olom-pirenena ao Hong Kong rehetra izahay, mba hitsangana ary hiteny. Tsy midika akory hoe tsy misy isika raha tsy mihaino antsika izy ireo."
Bilaogera Sady Mpikatroka Mafana Fo Ao Vietnam Migadra 3 Taona An-tranomaizina Noho Ny ‘Fanelingelenana Ny Fifamoivoizana’
Vietnam04 Septambra 2014
Nosazian'ny fitsaràna hifonja telo taona an-tranomaizina ilay Vietnamiana mpikatroka mafana fo malaza sady mpitoraka bilaogy noho ny “fanelingelenana be ny fifamoivoizana.” Niaraka voafonja taminy ihany koa ireo namany roa hafa.
Hong-Kong: Misisika i Shina Hoe Mpirotsaka Mpomba an'i Beijing No Tokony Hisy Mba Hisian'ny Filaminan'ny Firenena
Hong Kong (Shina)03 Septambra 2014
Nanambara i Li Fei, Kaomitin'ny Lalàna Fototr'i Shina, hoe "tokony ho olona tia tanindrazana ny olona misahana an'i Hong Kong", raha tsy izany, mety ho lasa antoko pôlitika iray tsy miankina mihitsy ny tanàna.
Ny Fampianarana No ‘Làlana Ho An'ny Fanovàna’ An'i Syria
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana02 Septambra 2014
Mikasa ny hanangana sekoly miisa 15 any amin'ny faritra tsy fehezin'ny fanjakàna ny Chance4Change, mba hiantohana ny dingam-pivoaran'ny fampianarana sy hitazonana azy ireo hahaleo tena lalandava.